Xuska Maalinta 15May+Waxtar La’aanta dhalinta Maanta & Hufnaanta Dhalintii Hore. – idalenews.com
Sanad walba waxaa dalka looga dabaaldegaa xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka May taasoo ka soo bilaabatay sanadkii 1943kii markii dhidibada loo taagay ururkii dhalinyarada ee SYL, kaasoo ay aasaaseen 13 dhalinyaro Soomaali ah, iyadoo isla markiiba ay kuwada biireen dhalintii dalka gaar ahaan goboladii uu gumeysan jiray Talyaniga.
Dhalinyradaas oo aqoontooda ay aad uga hooseysay tan ay heystaan dhalinta maanta, isla markaasna ku shaqeeynayeen xaalad cakiran oo gumeysi hoostiisa ah, ayaa waxeey ku guuleeysteen, in ay xaqiijiyaan hadafkoodii ahaa in ay waddanka ka xoreeyaan gumeystah isla markaasna ay dhisaan dowlad madax banaan oo dunida laga aqoonsanyahay, iyagoo aan dan ka laheyn in ay ka mid noqdaan dowladaas ay asaaseen iyo in aysan ka mid noqon.
Ururkaas SYL ee ay aasaaseen dhalinyaradaas oo markii dambana noqday xisbigii siyaaseed ee waddanka u weynaa intii aysan xukunka la wareegin ciidamadii Melateriga ayaa wuxuu ahaa mid kasbaday dadweynihii Soomaalida ee waqtigaasi joogay ayagoo intii ay ku jireen halggankii gobanimo doonka ahaa lala garab taagnaa taageero hiil iyo hooba isugu jirto.
Waxaa si gaar ah loo xusaa dhaqaalahii ay ku shaqeynayeen oo ahaa mid ka yimaada dadweynaha Soomaaliyeed, in haweenkii xiligaas ay gaareen heer ay sameeyaan ilo dhaqaale oo iyaga si gaar ah ugu taakuleeyaan SYL kaasoo gaaray in gabar kasta oo Soomaali ah ay ka qeyb gasho,kuwo ayaa waxeey lacagaha ay bixiyaan ka keeni jireen tinaar muufo lacag ay ka shaqeeyeen iyadoo kuwana ay iibiyin jireen dahabkooda. Kasbashada kalsoonida shacabka aya inta badan ku timada hadba sida hoggaamiyayaasha ay ugu soo bandhigaan barnaamijyadooda iyo qorshe howleedkooda ay ku howlgelayaan iyo Hadafkooda ay higsanayaan. Taasoo ururkii SYL dadkooda ay ku qanceen sida ay wax u wadaan.
Haddaba, haddii aan qiimeyn ku sameyno waxqabadkii dhalinyaradii SYL iyagoo ku shaqeynayey isticmaarka hoostiisa,sida ay ugu guuleysteen ujeeddooyinkooda isla markaasna ay ugu magac yeesheen, iyo dhalinta manta ee nasiibka u yeeshay in ay indhahooda ku arkaan sida sahlan ee ay u bur burtay dowladdii dhismaheeda ay kusoo howshoodeen dhalinyaradii SYL, ma inoo suurta geleysaa in aan aragno heerka uu gaarsiisanyahay waxtar la’aanta dhalinta manta iyo waxgalka iyo hufnaanta dhalintii hore?
Maalinta 15ka May waa maalintii la asaasay ururkii Syl ee Xornimo doonka Soomaliya soona hooyey Guudha aan Maanta harsanayno waxaana Maanta laga Xusayaa Maalintaas meelo kala duwan oo dalka soomaliya oo dhan.
Akhriso: Sababihii ka Danbeeyay Aas-Aaska ururkii Gobnamadoon Ee SYL.